Sina: izaho no i Liu Xianbin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2010 5:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Italiano, বাংলা, Español, English
Voalohany, iza moa i Liu Xianbin （劉賢斌）? 42 taona i Liu ary nandany ny iray ampahatelon'ny androm-piainany tany am-ponja izy. Nogadraina indray izy amin'izao fotoana izao. Ity ambany ity ny sariny ao amin'ny mombamomba azy :
Mba hanehoana ny fanohanana an'i Liu, nanomboka nanao fanentanana an-tserasera ireo mpitolona eo an-toerana sy any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny hiaka hoe “ izaho no Liu Xianbin ” tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay. Taty aoriana, vondrona 16 momba izany no natsangana , toy ny vondrona Hong Kong , vondrona Shandong , vondrona Anhui , vondrona Inner Mongolia , vondrona Guangxi, vondrona Shaanxi, ary sns .
Iray amin'ireo naman'i Liu Xianbin izay narovany i Chen Yunfei avy any Sichuan. Ankehitriny, anjaran'i Chen indray no manohana an'i Liu amin'ny alalan'ny fanaovana fitokonana tsy hihinan-kanina :
Xu Jianxiong avy any Shaanxi:
Wei Qiang avy any Shaanxi